Hookkara tibbana Oromiyaa keessatti uumame booda namoonni 359 to'ataman - BBC News Afaan Oromoo
Jeequma tibbana magaalota Oromiyaa adda addaa keessa tureen namoota 359 too'annoo jala oolchineerra jedhe komishiniin poolisii Oromiyaa.
Haala yeroo nageenya naannoo Oromiyaa fi jeequmsa tibbana ture ilaalchisuun BBC waliin gaaffiif deebii kan godhan komishinarri jeneraalaa komishinii poolisii Oromiyaa Kefyaalew Tafarraa naannoon
Oromiyaa amma sochii tasgabbiitti deebi'eera jedhan.
Komishiniin poolisii Oromiyaa sanbata darbe namootni 67 sababa jeequmsaatiin lubbuun darbuu erga ibseen asitti lakkoofsi nama sababa jeequmsaatiin du'ee kan dabale hin jirus jedhan.
" Sababa jeequmsaa Kanaan namoonni 67 du'uun erga ibsamee asitti namni du'e hin jiru kan nuti beeknu. Garuu magaalaa mojoo keessatti namni tokko, magaala Baalee Roobee keessattimmoo namni lama du'eeargamee jira. Kuni garuu sababni isaa jeequmsa haa ta'uu fi haaloo dhimma dhuunfaati kan jedhu qorachaa jirra" jedhan.
Namoota lubbuun darbe keessaas dhibbeentaa 80 kan ta'u walitti bu'iinsa keessatti kan miidhaman yoo ta'u kan hafe ammoo caasaa nageenyaa wajjin walitti bu'uun namoota miidhamanidha.
Yeroo jeequmsaa kanattis lakkoofsi namoota miidhaan irra gahe amantaadhaan baay'ee fi xiqqaadha jennee waan adda baafne hin qabnus jedhan.
"Jeequmsicharratti amantaa kanatu miidhame sanatu miidhame jechuun hin danda'amu. Hiriirichi gara walitti bu'iinsa amantaatti erga jijjirameen booda amantaa lamaanirraayyuu namni du'eera.
Kanaaf kanarraa baay'ata sanarraa baay'ata jennee wanti beeknu hin jiru. Gara lamaanuu miidhaan ni jira," jedhan.
Komii manni amantaa Ortodoksii hordoftoonni amantichaa hanga 70tti siqan sababa jeequmsa miilanaatiin na jalaa miidhamaniiru jedheefis "nuti gabaasa akkanaa hin qabnu.
Oromiyaa guutummaatti kan to'atu nu'i. Nutimmoo gabaasa akkanaa hin qabnu isaan eessaa gabaasa akkasii akka argatan waan beeknu hin qabnu" jedhan.
'Wal tuffachuurra wal gorfachuutu nu baasa'
Manneen amantaa yeroo jeequmsaa kana miidhaman kan ilaaleenis, manneen amantaa sadii irra miidhaan akka gahe himan.
"Magaalaa Adaamaa keessatti masjiidni tokko akka gubatu godhamee jira. Bakka biraattis Waldaan kiristaana protestaantii fi bataskaanni ijaarsisaa jalqabbiirra jiru tokkos akka gubatu ta'ee jira" jedhan.
Poolisiin Oromiyaa jeequmsa miilanaa akkamitti too'achuu dadhabe kan jedhuufis" poolisiin Oromiyaa nagaa kabachiisuuf hanga aarsaa lubbuu kanfaluutti gahe. Bakka hundatti hiriirri bahame ammooo humnaa ol ture.
Dhimmichi sadarkaa kanattuu akka gadi bu'u kan godhe miseensa poolisii keenya qaamolee nageenyaa biroo waliin qindaa'udhaan" jedhan.
''Poolisiin Oromiyaa nagaa naannichaa kabachiisuuf kan du'e kan miidhame tureera, gatii guddaa kanfaluudhaan balaa uumamuu malu xiqqeessuuf milkaa'eera jenneeti amanna'' jedhan.
Komii poolisiin Oromiyaa namoota irratti tarkaanfii fudhatee ajjeeseera jedhuufis taateen akkasii mul'achuu himan komishinarri jeneralaa Kefyaalew Tafarraa.
"Magaala Amboo keessatti taateen akkanaa mul'ateera. Miseensonni kana godhan yerosuma too'atamanii dhimmichi qoratamaa jira. Tarkaanfiin suni madaalawaadhaayii? Maaltu garasitti isaan oofe?
Kan jedhu qoratamee yoo ergaa biraas qabaatan hojmaata keenyan kan ittigaafataman taha"jedhan.
'Aggaammiin' Jawaarirratti gaggeeffame ija siyaasaafi nageenyaatiin akkamitti ilaalama?
Jeequmsa tibbana ture irratti poolisiin Oromiyaa garee tokkoof loogeera jedhamee komii dhagahamu kan ilaaleenis kuni amala miseensa keenya irratti mul'ate miti jedhaniiru.
"Poolisiin keenya uummata baraara uummata hundaa. Kanaaf jeequmsicharratti kallattii lamaaninuu madaalee olaantummaa seeraa kabachiisuuf socho'aa ture. Oromoorra goree saba biraa miidhe kan jedhu akka waliigalaatti dhugaa miti. Poolisiin keenya gaachana sabaa ta'uu isaati bakka hundatti kan mirkaneesse," Jedhan.
Jeequmsa roobii darberraa eegalee Oromiyaa keessa tureen namootni 359 shakkamanii too'annoo seeraa jala ooluu fi hojiin kuni ammas itti fufee akka jirus himaniiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa nagaa fi tasgabbiin idilee deebi'ee magaalonni hundis sochii naga qabeessa keessa jiraachuus himan.
"Oromiyaan amma haala gaarirra jirti. Ummannis sodaa tokko malee bobba'ee galaa jira. Karaan cufames hin jiru. Manneen yeroo jeequmsaa miidhaan irra gahes deebifamanii ijaaramaa jiru. Magaalota gurguddoo keessattis mariin adda addaa taasifamaa jira" jedhan.